Ayaa kulan tallaabo suuqa Android ayaa ka baxay sannadihii u danbeeyay, waxaana uu ugu dambeyntii billaabeen kulan in ay si tartiib ah u noqdaan caan. Waxaa jira badan oo kulan tallaabo lacag la'aan ah iyo sidoo kale lacag-ka-ciyaar kulan, laakiin wax kasta oo ay kulan aad doorato jiraan wax ka soo baxay qof kasta.
Sidaa darteed, wax dhib ah maleh meesha aad aad tahay had iyo jeer ka heli doontaa ciyaarta ficil u ciyaaro, haddii ay tahay ciyaar oo kaliya ee la soo dhaafay markii safar dheer, ama ciyaar in aad rabto in aad ku heli doonaan ilkaha galay.
Sidaas halkan waa top 50 kulan tallaabo in la heli karo si ciyaaro dhammaan qalabka Android.
Play kale oo aad gacanta ku waynaan ay cunaan dadka kaa soo horjeeda. Laakiin iska dhawra, sida ciyaaryahan weyn isku dayi doonaa inaan sida ugu fiican ee aad u cunaan. Isku day inaad aad ugu fiican si ay u noolaadaan oo ay noqoto gacanta ugu weyneyd ee ciyaarta.
2. Markab Battle: ll 3D World War
Price: $ 1.06 - $53.28
Xakamee weelasha ll World War dhab ah oo iyaga Itaaliya u guul. Habee weelashiinna ku qaada, oo isku day in aad ku guuleysato dagaalo aad. Shiraaq Arizona USS iyo xitaa HMS Bulldog ka dhacay taariikhiga ah xuddunta.
Price: $ 2.50 - $126.0
Hor-dalkan nacnac - Land ee Candy. Cun nacnac badan iyo sida cake sida aad awooddo. Burburiyo nacnac heerka ku xiga ee aad qaadi doonaa.
Price: $ 0.90 - $ 3.62m
Hel dabaqa qoob ka ciyaarka iyo qoob la Psy. In badan oo balaadhan inaad buuxisaa ee lacagta birta ka badan inaad heli doonto. Qaladaadkeena kulan weyn oo u ururiyaan characters, iyo yaddeena gaadiidka ee Ihmemaa nacnac this.
Slide, ordo, boodi oo noqon in this ciyaarta exhilarating. Isku day in ay ka baxsadaan la sanamkiiba ka habaaran, by adakaanayso kaymaha halista ah, miinooyinka iyo qarar. Eeg sida ay idinka fog ordi karaan.
Price: $ 0.96- $ 59.05
Ciyaarta Free tartanka qabsado meesha aad naftaada god ciyaartoyda kale. Naftaada Heli baaskiilada cusub adigoo buuxinaya heerarka cusub iyo guulaha. Isku day inaad gacanta ugu kuwan raadkaygay waalan, iyo Caalamka waalan.
7. Dude Eebaha 2
Price: $ 2.60- $ 39.23
Hit darbo trick in ay maanka ku imanayso. Buunka walax, boodi on trampolines iyo wax jebin. God darbo trick aad saaxiibadaa iyo shisheeyayaal, xitaa lagu furo content gaar ah.
Price: $ 1.23- $ 62.45
A ciyaarta tallaabo lacag la'aan ah oo cusub oo taageerayaal ah Lara Croft. Xaadho runta by maraya deegaanno, kuwaas oo adag oo soo arag inta aad u noolaadaan. Kaxeeyo si degdeg ah oo xitaa dhibaateeyo saaxiibadaa baxsad relic.
9. la yaabin Contest ee Champions
Price: $ 0.78- $ 124.90
Ka caawi Antman in uu baaris inta boqortooyadayda ku jirta dagaal oo ay la socdaan calaamado kale la yaabteen. Xitaa sameeyo xulufo la saaxiibadaa iyo qaato on balaadhan cusub wada. Ka dhiso koox cusub si looga hortago burbur ku Caalamka yaab.
10. Xabsiga Break: cakiran
Waxaad ma danbi si loo joojiyo in dhimasho lagu xukumay waa in aad isticmaasho xirfadahaaga aad caddeysaa inta aad eed lahayn. Xalliyaan xujooyinka; aad isticmaasho xirfadahaaga inay dantooda ka ilaalada iyo maxaabiista aad. Ma wax kasta oo aad awoodo si aad ugu danbeyn ka baxsadaan.
11. dhimanaya Kombat X
Price: $ 2.46- $ 123.93
Samaynta, Iyo La horseedi kuu gaar ah kooxda kombat dhimanaya dagaalkuu dhex galay. Urursada koox ka kooban rag iyo dagaalami tartanka ugu weyn on Earth. Waxaa jira sawiro cajiib ah in aad feeraan midig ee caloosha, sida aad ka doodid ciyaartoyda kale dagaal ugu dambaysta.
12. dhintay naga mid ah
Price: $ 1.23- $ 124.90
Toos in Zombie this iyaga toogan ciyaarta ku dul dhintay. Toos ugu dhintay sida aad ka qayb qaadato balaadhan kala duwan magaalooyinka kala duwan. Iska ilaali zombies oo noqon badbaadiye keliya ee caalamka oo idil.
13. Top Gear: burburi safarkii
Price: $ 2.79- $ 131.14
Burburi jiido sida badan ee aad awoodid. Samee wax qarxin iyo qayb ka mid ah gaariga safarkii offs wajiga. Soo iibso gaari oo cusub iyo xitaa cusboonaynta gaariga horay u doortay.
Price: $ 1.10- $ 2.32
Save aadanuhu by baxsanaya in aad gantaal. Save aadanuhu sida badan ee aad awoodid adiga oo gantaal, sida dunidu ku wareegsan aad burburo. Toos tartan cusub maalin kasta.
15. Sonic Final
Price: $ 1.15- $ 57.75
Tani waa ciyaar aan dhammaadka lahayn orodka inay tijaabiso xirfadahaaga. Tani waxay si degdeg ah tallaabo buuxiyey oo kulanka madal yeelan doonaan Sonic saraysa oo diidanaa in qaybaha kala duwan, oo ay ku jiraan Historical, Saaxiibow, soo horjeeda League iyo World. Ururi siddo iyo umuuruhu xoogga dabeecadaada.
Ku qor Mr Chen ayaa Cunsurka Tournament oo laga adkaado, sayidyadooda kale element. Isticmaal xoog by furo aad iman kara run, oo u dirira kale aasaaska Masters kasta oo awoodooda u gaar ah.
3D 17. Pixel Gun
Price: $ 1.15- $ 122.05
Kulan kadhacay iyo sidoo kale deathmatch waxaa lagu ciyaaray kulankii biqil this 'em kor. Battle ka dhanka ah saaxiibadaa iyo astaysto aad ciyaaryahan. Isticmaal hub kala duwan ee dagaalka iyo arko haddii aad ku noolaan karaa in garoonka.
Price: $ 0.77- $ 124.75
Play this ciyaarta Arcade oo dhan iyo raggii caaro iyo dumarka midoobaan wada urureen oo gees khatar ku ah. La dagaallama si ay u noolaadaan oo u dirira 5 madaxda in dagaal lagu daray buuxiso 25 hawlgallada in arin kasta. Kulankaan ayaa si joogto ah waxay wadaa sidii aad u dhex mara dhinacyada kala duwan.
19. Shan Habeenada ee Freddy ee 3 Demo
Tani waa version demo ee ciyaarta taas oo ugu dhaqsaha badan la sii dayn doono.
Ururi dhibco iyo aad flouride koraan ama gobble ciyaartoyda yar yar. Kulankaan ayaa ahaa mid la waxyooday oo ay Agar.io; Naftaada god ciyaartoyda kale oo dhan waa tirsan yihiin isku dayayaan in ay cunaan kasta oo kale. Kulankan cuna ama la cunin. Waxa kale oo aad qarin karo godadka madow haddii aad u yar oo ku filan.
Price: $ 1.20- $ 124.75
Tani muuqaal cajiib ah kulankii ugaadhsiga Qabille oo FPS aad u ugaadhsan xoolaha qalaad awood u. Waxaad dareemi doontaa sidii aad tahay runtii duurka sida xayawaanka aad u weeraraan, naftaada Bag koob sida aad u toogtaan xayawaanka ugu weyn ee ciyaarta. Waxaad la kulmi doonaan haramcadka, iyo libaaxyo, iyo xayawaanka kale ee duurjoogta ah.
22. lumiyaan miisaan Slimming
Price: $ 2.01- $ 101.36
Isku day badiyay baruurta iyada oo kulankaan. Waxaa jira kulan mini, waayo, waxaad isku dayi doontaa garoonka, sida aad bedesho muuqaalka aad dhex slimming. The cunto dheeraad ah oo caafimaad leh aad cuntaan qadaadiicda badan oo aad ku hamineysay doonaa.
Noqo geesi iyo bixiyo kulan badan Lego oo dhan hal meel. Magaalooyin u dhista, iyo sidoo kale iyaga dumin. Soo qaado in aad koox khubaro ah ku xasuuqeen, iyo Qaylo iska dhismayaasha. Dodge gaadiidka socota ee heliplane sida aad samatabbixin xamuul garoonka diyaaradaha.
24. dagaalama Shadow 2
Price: $ 0.98- $ 49.83
Tani waa dagaal ah oo ciyaarta RPG in mid ka mid ah. Isticmaal farsamooyinka fanka legdinta lagu bahdilo madaxda jinnigii ayaa ku jiidhaya oo ku cadowga. La dagaallama aad dhex lix Caalamka kasta jinniyo ku jiraan sidii aad isku daydo iyo xir iridda Hooskooda.
25. Whack deriskaaga
Dhacay deriskaaga iyo markaas dhigay oo ku saabsan iyaga ku dhinteen. Isticmaal shay oo kala duwan si ay u disho deriskaaga oo waxaan ka dhigi waxaa sida ugu xun ay suurto gal u dhinto. Tani ciyaarta laga argagaxo yeelan doonaan kugu daboolay dhiig deriskaaga.
26 u futay Commando: WW2
Buuxi ergooyinka ka dhacay WW2. Mission kasta tijaabin doonaa xirfadaha oo aad dagaal ciidamada cadowgu ku Berlin, Germany iyo wadamo kale oo badan. Hayso hub badan ee aad qubo, doortay oo mid aad u reebi doonaan dadka kaa soo horjeeda la.
3D 27. Yaxaas Qabille
Play sida yaxaas waaweyn iyo ugaarsi, weerar iyo dabbaasha. Cun wax iyo wax walba oo aad marayso; abuuraan xaalad jahawareer sida aad wax u weeraraan in guuro. In kasta oo la xasuusto in lagu ugaadhsado iyo ugaadhsadaha ku dhufan kara wakhti kasta. Isku day inaad buuxiso gabaad ka hor lagu dilay aad.
28. Modern dagaalanka 5: mugdigu
Price: $ 1.23- $ 124.75
Ugu fiican ee ciyaarta Shooter taxane FPS. Nin waalan ayaa isku dayaya inuu waad dooxi doontaa dunida oo dhan si ay u Qaybo, si aad u baahan tahay si aad naftaada ka bixi karaan mid ka mid ah xaaladda ba'an ee in kale. Ama waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad la abuuro koox saaxiibadaa iyo tijaabi aqoontaada.
29. <br> <br> Battle: 3D Diyaarad Helicopter ah
Price: $ 1.12- $ 63.27
Wadahadal hawlgallada sida pilot helicopter ah. Xakamee aad helicopter iyo matalaada horyaalka. Naftaada Wadahadal in xaaladood military oo ay isticmaalaan xirfadaha dagaal aad hawlgallada kala duwan.
30. toogte 3D dilay
Price: $ 1.18- $ 119.43
Noqo Shooter kama dambaysta ah oo lagula dagaallamo dambiyada oo heer caalami ah. Gan badan oo hub kala duwan oo ay dilaan qof walba. Eeg aad madaxa ku daatay laayey dhaqaaq tartiib ah sidii aad u badbaadin dhibanayaasha iyo dilaan bartilmaameed ah oo ku Qarsoon dadkii badnaa.
31. Xatooyo Grand Auto: iFruit
Connect aad kulan ee Xatooyo Grand Auto iyo ciyaaro xiiso leh hawlaha. Samee in aad shaqo aad u gaarka ah rinjiga caadadii; shakhsiyeeyo lanbarka kuu gaar ah. Xitaa muuqdaan in ay xayawaanka dalwaddii jaraan eyga.
32. Miami Crime Qabille
Isticmaal qof ay ka qayb qaataan dambiyada. Taga oo Miami iyo in la abuuro xaalad jahawareer sida aad ka qayb qaataan dambi wadooyinka.
Kulan FPS halkaas oo aad u baahan tahay si ay u ururiyaan blocks si ay kor hub aad iwm naftaada qaab harko kala duwan, oo isticmaal launcher gantaal inay qaataan kooxaha nebcaa. Dhar qof ilaa, barbareeyo ilaa iyo ururiyaan blocks.
34. San Andreas: Real 3D burcadda
Price: $ 6.65- $ 133.06
Samaynta, Iyo La dhigay boqortooyadii dambi gudahooda magaalada Malaa'igta. Luudh iyo xubnaha baandooyinka kale iyo samatabbixin baakadaha. Horumarka dhex ergooyinka kala duwan sida ay u noqdaan kuwo waalan oo xanuunsada. Xakamee jidadka iyo badbaadin qoyskaaga.
La dagaallama mashiinada ka baxsan xabsiga Skynet, sida tartanka aadanaha ayaa laga yaabaa qarka u dabar.
Ll 36. Lego Star Wars Yoda
La dagaallama oo dagaalka ku jira dagaal xiddiga Lego. Waxaa jira kulan mini in ay tallaabo ka buuxaan, sida aad la diriraan Darth Vader. Ama caawin adduunka, iyadoo Yoda iyo Jedi badbaadin by dhinacaaga.
Hero 37. Xarig
Isticmaal Xadhig inay uur sida Spiderman. Sida aad gacan looga gaysto in jidadka ilaa iyo iyaga uga takhalusi dembi. Isticmaal farsamooyinka fanka legdinta iyada oo heerar kala duwan.
Isticmaal qoryaha kala duwan toogashada. Tani waa ciyaar Qabille ah iyo ku siinaysaa fursad ah in ay toogtaan diyaariyeen ah ee qoryaha kala duwan oo ay ku jiraan handguns aad, qoryaha diirada leh iwm
39. Dino Ugaarsatada: xeebaha Dhacay
Price: $ 1.20- $ 121.32
Hunt dinosaurs ama la ugaadhsado aawadeed iyaga by. Socda dunida ka mid ah dinosaurs galay iyo qayb ka mid ah duulaan, oo waxaa ka buuxa khatar ku noqon. Hunt adduun Jacka in uu ahaa taabanin. Win hub kala duwan oo haddana goosta abaalmarin ah.
40. Gaboodfalkii: Ilaah naga mid ah
Price: $ 1.93- $ 96.91
Samee kooxda gaarka ah ee geesiyaal super DC iyo galaan garoonka. Kulankaan waa kulankii card collectible in xor u yahay inuu ciyaaro. Waxaad dhiso dhaqaaqdo, qalabka, jilayaasha iyo soo galaan garoonka ayaa waxaa halkaas oo aad la kulmi doontaa saddex saddex tallaabo dagaal.
41. boqorada soo horjeeda: Da'da burbur ah
Dhis saldhig ku jiidhaya oo ku xafiiltamaan aad. Qabashada weerarada iyo cadaawayaashiinna laga adkaado dagaalka istiraatiiji ah. Ku biir wuxuush, ilaahyo iyo ciidamada kale ee wada sidii aad u noqon dagaalo ba'an ay kuugu faa'iidayn.
42. Future Crime Qabille
Jilo dambiyo kala duwan. Socda, gurguurto oo wuxuu oofin dhaqaaqdo kale sida aad maraan ergooyinka kala duwan. Isticmaal qoryaha iyo hubka kale ee sida aad dambi ka qabtaan.
43. Modern toogte
Kulankiisii ​​ugu horeysay qof Shooter. Dhex mara She'ool dembiyada iyo mobs cadaawayaashooda toogtaan. Isticmaal xirfadaha gooldhalinta si aad u toogtaan aad bartilmaameed oo taga, waayo, headshot ah. Noqo shirqoolka ah aamusan sida aad ka qayb qaadato hawlgallada khatar ah.
44. Gun Fallaadha gan, War
Qofka First iyaga kor ciyaarta. Waxaad tahay Commando ah iyo waxaad u baahan doontaa in ay la kulmaan Cadawgiinna, sida aad dhamaystiran hawlaha iyagaad ka baabbi'in doontaa. Ku biir kooxda weerarka iyo naftaada awood in ay soo iibsato hub ay ku ururinta lacagta birta ah sida aad cadowga ku soo gani.
Weerar dadka kaa soo horjeeda doonniyo aad. Toos ugu soo horjeeda kala duwan ee waqtiga dhabta ah iyo dunida oo dhan. Samee istaraatijiyad ka dibna ay weeraraan dadka kaa soo horjeeda. Sidoo kale u guuraan ilaa safafka sida aad madal difaaco.
Price: $ 1.23- $ 37.41
Play kulankaan sida Kong daanyeer ah. Dheereyn kuli muuska aad uur geed canab ah in geedka canabka ah. Samayso dhex godadka, kaymaha iyo treetops sida aad u guurto dhagxaanka iyo falgali aad dhex heerar kala duwan.
47. Burcad Vegas
Ka qaybqaado dagaal ee City of Sin. Xakamee magaalada iyo naftaada quusin in qoriga dagaallo. Isku day oo dhammeystiran 80 ergooyinka sida aad ku guuleysato dagaalladii maafiyada iyo dhistaa kooxda tuug iyo wareegaan Vegas.
Price: $ 0.93- $ 59.53
Save dalka reer Grand Gaia ka timaada Ilaaha Maxwell. Waxaa jira xayawaanka iyo geesiyaal si ay u ururiyaan, sida aad u ahaan umuuruhu iyo yeedho. Waxaa jira caqabado aad maalin walba ka fool, oo aad u cusboonaynta karaan khayraadka iyo qalabka goosashada. Dugaagga Control iyo aad u hesho dagaalyahan geesi ah inuu idiin dagaallamo.
Price: $ 2.52- $ 124.75
Dhis aad robot u gaar ah oo la dagaalama aalado ciyaaryahan kale. Dhis aalado oo waaaweyn oo ay ka qeyb qaataan tartanka, taas oo ka mid ah 20 dagaal. Ka qaybqaado fadhiyada sparring aan xad lahayn oo aad go'aan ka istaraatijiyad sida aad 30 caqabado xoog leh ka fool.
50. Mini gaysteen iyo waxdhacayaal
Price: $ 0.98- $ 99.73
Tani waa ciyaar pixel Shooter 3D. Play ciyaaryahan hal ama multiplayer. Hel gacmahaaga ka badan 15+ hubka iyo lacagta birta ah u helaan sidii aad u samayn dileysaa. Xitaa heli abaal noocyada kala duwan ee dileysaa iyo koraan sidii aad horumar loo sii marayo Nidaamka.
> Resource > Emulator > Top 50 Android Action Games